I-Benicasim - Costa Azahar - Umphakathi waseValencian - Spain
IBenicasim itholakala e-13 km enyakatho yedolobha laseCastellón de la Plana, enyakatho eyedlulele yoMphakathi waseValencian.
Ungumasipala kanye ne-spa etholakala esifundazweni saseCastelló, eCosta del Azahar eSpain. ISierra del Desert de les Palmes, eqhubeka phakathi nezwe, ivikela idolobha emoyeni wasenyakatho. Leli gama lisuselwa esizweni seBanu Qasim, ingxenye yamaKutama Berbers ahlala kule ndawo ngesikhathi ama-Arab athumba iSpain ngekhulu lesi-XNUMX.
IBenicasim itholakala e-13 km enyakatho yedolobha laseCastelló de la Plana, enyakatho eyedlulele yoMphakathi waseValencian. Idolobha linabantu abangu-18.098. Umnotho wawo usekelwe ikakhulu kwezokuvakasha; leli dolobha laziwa ngamabhishi alo kanye nemikhosi yalo yomculo efana neBenicàssim International Festival (FIB) neRototom Sunsplash.
Izindaba zakamuva ngemikhosi yeBenicasim. 16/10/2021 Umkhosi weSanSan Umkhosi weSan San yi-
16/10/2021 Umongameli weGeneralitat Valenciana, uXimo Puig, umemezele ukuphela kwemikhawulo